Mahay manavaka ny fampianaran-diso
"Ry malala, raha manao izay zotom-po rehetra hanoratra aminareo aho hilaza ny amin'ny famonjena iombonantsika, dia nisy nahatery ahy hanoratra aminareo, hananatra mba hiezahanareo mafy hiaro ny finoana izay efa voatolotra indray mandeha monja ho an'ny olona masina" — Joda 3.
Nitondra ity hafatra ity i Joda mba hiarovana ny mpino amin'ny fampianaran-diso avy amin'ny mpampianatra sandoka, olona izay manana ny endriky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, saingy mpitarika tsy azo antoka. Amin'izao andro farany izao dia hitsangana ireo mpampianatra sandoka ary miasa amin'ny zotom-po fatratra. Ny karazana fampianarana rehetra dia entina handrebirebena sy ampiviliana ny sain'ny olona amin'ny tena fahamarinana. Io anefa no maneho ny toerana azo antoka tokony hisy antsika amin'izao fotoana hiasan'i Satana amin-kery izao amin'ny mpivavaka, ka hitarihany azy ireo hihambo ho marina, kanefa tsy mametraka ny tenany ho eo ambany fitarihan'ny Fanahy Masina.
Hifangaro amin'ny dingam-panandramana rehetra ny fampianaran-diso, ary hotohanana amin'ny hafanam-po avy amin'i Satana mba hambabo ny sain'ny fanahy tsirairay izay tsy miorina sy mamaka amin'ny fahalalana feno ny fitsipika masin'ny Teny. Avy eo amintsika mihitsy no hitsangana ireo mpampianatra sandoka manaiky ny fanahy mamitaka rehetra izay manana fampianarana avy amin'i Satana. Hitaona ny mpianatra hanaraka azy ireo mpampianatra ireo. Miasa amin'ny fomba tsy ampoizina izy ireo ary mampiasa teny mandrevo sy manao fampianaran-diso amin'ny fahakingana sy amin'ny fandresen-dahatra mamitaka.
Ny hany fanantenana ho an'ny fiangonana dia ny miambina mandrakariva. Ireo izay miorim-paka tsara amin'ny fahamarinana ao amin'ny Teny, ireo izay misedra ny zava-drehetra amin'ny "Voasoratra hoe" no eo ambany fialofana azo antoka. Ny Fanahy Masina no hitarika ireo izay manome lanja ny fahendrena avy amin'Andriamanitra ambonin'ny fampianaran-diso ataon'ny olon'i Satana. Aoka hampitomboina ny vavaka; tsy araka ny fomba fiasan'olombelona fa eo ambany fitarihan'ny fitiavana ny fahamarinana ao amin'i Kristy. Ny fianakaviana mino ny fahamarinana dia tokony hilaza ny teny fahendrena sy fahalalana, teny izay ao amin’ny vokatry ny fandinihana ny Soratra Masina.
Ankehitriny no fotoan'ny fitsapana sy fahoriana. Ankehitriny ny fotoana izay tsy maintsy hikombonan'ny molotra tsy hiteny fiampangana ireo rahalahy sy rahavavy. Aoka izy ireo hilaza teny izay mitondra fampaherezana sy manatanjaka ny finoana izay miasa amim-pitiavana sy manadio ny fanahy. - KC, 5.